What are Kratom extracts and how are they different to other formulations that you might find this plant in? If you are navigating the Kratom marketplace for the very first time, you may find yourself encountering a number of new terms like Kratom tinctures, Beeyada, liquids and oils. All of these are different forms of extracts, typically denoted as having a number in their name followed by an “x” (i.e. 1x, 8x , 15x or 50x). Extracts are usually more expensive, waxyaabaha awoodba sare oo la kariyey ama ku daahir yeelay hab qaar ka mid ah si ay qiyaasta ka yar wax ku ool ah ayaa loo baahan yahay. Waxaa jira dood badan oo ku saabsan mudnaanta isticmaalka waxyaabaha laga soosaaray Kratom; qaar ka mid ah door bidayaan in daawooyinka, kuwaas oo sababta oo ah waxay noqon kartaa si weyn u xoog halka kuwo kale ay sheegayaan in ay khatar weyn oo dulqaad iyo waa in laga fogaadaa by users cusub.
Waa maxay Warbixiinta Kratom
doodii Kratom la sameeyey by karkaraya caleemaha la jajabiyey ama budada ah ee geedka speciosa Mitrogyna iyo evaporating biyaha. Ujeedada waxay tahay in la soo saaro content dhimirka caleenta cayriin si ay u la diyaarin karaa iyo lagu iibiyo format ah denser. Ka dib markii content biyaha la sifeeyay oo laga saaray, waxa hadhay waa qaro weyn a, Jinka mugdi la-fiirsashada sare ee wada jir Kratom. Haddii laga soosaaray ka hadhay si ay u xoojiyaan, waxaa galay cusbi a blackish celin doonaa. soosaaray ka dibna la dhulka karaa budo keligeed, iibin sidii cusbi adag, ama dhigay Tincture a dareere ama saliid.
Marka la samaynayo soosaaray a tayo sare leh, hadafka la leeyahay waa si loo ilaaliyo sida ugu badan ee content asalka dhimirka ee suurtogalka ah, idinkoo xusuusanaya in ay jiraan dhawr kiimikada firfircoon oo kala duwan in ay gacan faa'iidooyinka badan ee la isticmaalayo Kratom. Saddexda wada jir ugu weyn mitragynine yihiin, 7-hydroxymitragynine, iyo mitraphylline, laakiin connoisseur Kratom kasta oo kuu sheegi doonaa in ay tahay xidhiidhka dabiiciga ah oo ka mid ah maaddooyinka kale oo badan leh ka dhigaya speciosa Mitrogyna sida warshad firfircoon. soosaaray kala duwan ee ka buuxa wada jir waxaa loo yaqaan Full Spectrum Kratom ama mararka qaarkood sida Full Spectrum Tinctures (FST).
Waxaa caado ah in doodii fasalka sida isagoo 1X, 5x, 10x ama lambarka qaar ka mid sare ee cadaadis gaar ah oo Kratom. Tusaale ahaan, laga yaabaa inaad aragto Kratom 15x Bali Warbixiinta lagu iibinayo by iibiya qaar ka mid ah. Hase yeshe, waxa ay dadka ugu rumaysan, lambaradan ma ka dhigan tahay in alaabta laga soosaaray waa 15x ka xoog badan Kratom ka baxo ama boolbare ama aad qabto 15x content dhimirka garaamka. Halkii, dhufashada ah loola jeedaa factor-fiirsashada by mugga. Tusaale ahaan, budo 15x soosaaray ah ay bilaabeen lahaa sida 15 garaam oo burbura ama caleemo budada ah, ka dibna hoos ugu dhaadheceen in la 1 garaam. Maxaa yeelay, ma jiraan wax content dhimirka caadiga ah guud ahaan geedaha Kratom kala duwan oo ma jiraan tilmaamaha laga soosaaray universal, 15x soosaaray a daruuri ma noqon doonto 15 jeer ka xoog badan soosaaray a 1X.
Mid ka mid ah wax muhiim ah in aad maskaxda ku hayso waa in sare ma aha had iyo jeer ka fiican marka ay timaado soo saaro qodobo isku dhufashada. Waxaa ay jireen isbedel ah ayaa dhawaan si ay cadaadis soo baxay waxyaabaha ku qoran u sarraysaa sida 50x ama 100x (taas oo u baahan in ay noqon 100% alkaloids). Guud ahaan, wax soo saarka kasta oo waa Warbixiinta run Full Spectrum ma noqon karo xoog badan 20x haddii kale waxaad bilaabi lahaa badiyay content dhimirka ee geedi socodka isdaahirinta. The caleen Kratom celcelis ahaan waxay leedahay 1% content dhimirka isku qasan oo dhan ka dhexeeya 25 - 40 kiimikooyinka kala duwan. A-oolnimada fiirsato caadiga ah ee 20x soo saari lahaa natiijada saafiga ah 20% firfircoon oo 80% arrinta warshadda hartay. Sida aad dhaafo tirada this, waxaa jira su'aalo ku saabsan sida ugu badan ee laga soosaaray la nuugo karaa sidoo kale waxa dhibic aad dhab bilaabaan in ay duleeyaan content qayb kiimikada guud.
doodii Kratom noqon kartaa wax badan oo xad ah ka qaalisan waxyaabaha aan xoog sida caleemaha cayriin ama boolbare. Mar kasta hubso in aad ku gaadho a kaydka qiimaha net per qiyaasta marka la go'aaminayo in ay u soo iibsadaan alaabta laga soosaaray. Qaar ka mid ah ilaha talin doona bilowga ah si looga fogaado in doodii gebi ahaanba marka ugu horeysa bilaabin isticmaalka waxyaabaha Kratom tan iyo halista waxyeellooyinka iyo dulqaad noqon kartaa sare. Haddii aad ku cusub tahay qaadashada xarunta this dabiiciga ah, hubaal ka fiirsan marka hore isku deyin budada ah ama bilaaban la soosaaray ugu hooseeya heshaan waxaad ka heli kartaa.
Waayo, kuwa isticmaala badan oo horumarsan, doodii yihiin doorasho macne sababtoo ah waxay samayn bixiyaan shahaadada weyn ee sahlanaato marka la barbar dhigo waxyaabaha unextracted. Haddii aad isticmaalayso soosaaray ah budada ah, Tincture ama dumin kara Kratom a, waxaa muhiim ah in aad si sax ah loogu badalo qiyaasta aad looga baahan yahay in ay ka fogaadaan qaadashada oo aad u badan. Guud ahaan, qof caadi ahaan u adeegsanayaa 5 garaam oo ah budada Kratom arki doonaa natiijada la mid ah ka 0.33 g of 15x soosaaray a. Xusuusnow, 20x soosaaray a khasab ma aha in 20 waqti ka xoog badan budada caadiga ah, sidaas beddelaad kuwanu waa ku qiimayso oo dabacsan at ugu fiican. Waa in aad ogaado dareenka qiyaasta shakhsi by bilaabo qadar yar oo logu saamaynta on your chemistry shaqsi.
Waa ay fududahay in ay ka badan-sameeyo oo la yeela oo keeni karaan waxyeelo sida lallabo, matag, daansan, incoordination muruqa iyo dhib u fikirayaa si cad. Qeybaha waa in inta badan ordeen ama loo isticmaalo qabsiyada si looga hortago in horumarinta dulqaad ah. Haddii aadan isticmaalaya Warbixiinta a Spectrum Full, khatarta ah in dulqaad iyo ka bixitaanka laga yaabaa in sare u sabab la'aanta ah ee wada jir kale si la isugu dheellitiro baxay saamaynta on your receptors neural. Sababta oo ah qiimaha sare iyo profile halis weyn, waxaa ka mid ah ayaa kuu sheegi doona in ay ka fogaadaan u yeela Kratom wadajir haddii aad la kulantid xanuun aad u daran ama aad ka qabatinka daroogada lagu bixitaanka. Ka taxaddar in sahaminta qayb ka this ee suuqa iyo in la hubiyo in ay raacaan tallaabooyin taxaddar ah ee kor ku xusan.